कृष्णप्रसाद दुलाल,महासचिव, नेपाल अटोमोवाईल एसोसियसन (नाडा)
विगतका अटो सो भन्दा यसपाली के फरक हुन्छ ? नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन अफ नेपालले यस वर्ष भदौ १३ गतेदेखि १८ अटो सो को आयोजना गर्दैछ । हामीले विगतमा ११ ओटा यस्ता सस्करणहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेका छौ । यो १२ औं सस्करण हो । यहाँ सम्म आईपुग्दा यसको प्रचारप्रसार र महत्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गएको छ । हरेक वर्ष आयोजना गरिने यस्ता कार्यक्रम आफैमा नयाँ र परिकृष्त हुने गर्दछन् । त्यसो त आसन्न अटो शो पनि नयाँ र परिमार्जित हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । यस मेलाका लागि हाम्रो तयारी पूर्णत अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । विगतका नाडा अटो शोहरुमा भन्दा यस पटकको शोमालाई थप व्यवस्थित बनाउने र सेवाग्राहीलाई सहजै सेवा लिने व्यवस्था मिलाइने छ । नयाँ पडक्टहरु पनि उत्तिकै सहभागी हुने छन् । हाम्रो उद्देश्य ग्राहकको चाहना बमोजिमको सेवा प्रदान गर्ने हो । त्यसमा हामी सफल हुनेमा म विश्वस्त छु ।
अटोमोबाईल क्षेत्रको ‘कुम्भ’ मेलामा मानिने यो अटो शोमा कुन –कुन सेग्मेन्टका डिलर तथा व्यवसायीलाई सहभागी गराउनु भएको छ ?
अटो शाो विशेषत नयाँ तथा आकर्षक भेहिकलहरुको प्रदर्शन गर्ने मेला हो । त्यसैले हामीले अटो भेहिकलहरुको डिलर तथा शोरुमहरुलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने गर्छाैं । यसमा टु हुईलर, फो हुईलरका साथै केहि हेभी सेग्मेन्टका भेहिकलहरु पनि समावेस छन् । त्यस्तै विभिन्न कम्पनीहरुले आफ्नो आधिकारिक स्पेयर पार्टस्लाई पनि समावेश गर्न चाहेकोमा हामीले त्यसलाई पनि केही स्थान दिने कोषिस गरेका छौं । यसमा केहि कम्पनीहरुले ओई फिटेट प्रोडक्टलाई प्रतिनिधिका रुपमा समाहित हुने छन । यस वर्षको नाडा अटो शोमा साना तथा ठूला गरि लगभग १ सय ३० ओटा स्टल रहने छन । त्यसमा १९ ओटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका ब्राण्डहरु रहने छन् भने १६ ओटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका ब्राण्ड र ६ वटा हेभी सेग्मेन्टका कमर्सियल ब्राण्डका गाडीहरु रहने छन् । त्यस्तै यो शोमा करिब ९० ओटा संस्थानहरुको सहभागीता रहने छ । गत वर्ष विभिन्न ६५ कम्प्िनका १२० स्टलहरु रहेका थिए भने १४ ब्राण्डका चार पाङ्ग्रे, १४ वटा दुई पाङ्ग्रे र ५ ब्राण्डका कमर्सियल सेग्मेटका गाडीहरु प्रदर्शनमा राखिएका थिए ।
अटो शोले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? नाडा अटो शो को मुख्य उद्देश्य भनेको अटो र अटोसँग जोडिएका सबै पक्षहरुलाई सहज र सरल रुपमा एकआपसमा जोडिने वातावरणको सिर्जना गर्नु हो । जहाँ व्यवसायीहरुले आफ्नो प्रोडक्टको सहज प्रदर्शन गर्ने अबसर पाउने छन् भने अटो पारखी तथा खरिदकर्ताहरुले एकै स्थानबाट अबलोक गरेर छानी छानी रोजी रोजी गाडी किन्ने अवसर पाउने छन् । त्यतिमात्र होईन यो कार्यक्रम त अटो व्यवसायी, अटो खरिदकर्ता, अटो लगानिकर्ता र लगानिको शुनिश्चितकर्ता सबैको जमघट हुने उपयुक्त माहोल पनि हो । आर्थिक परिचालन हुने यस्ता कार्यक्रमले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव पार्ने गर्दछ । देशकै करिब ३३ प्रतिशत कर संकलन हुने अटो क्षेत्रमा हुने यस्ता कारोबारले मुलुकको अर्थ तन्त्रमा निकै प्रभाव पार्ने गर्दछ । यस क्षेत्रको लगानि पनि उत्तिकै बढ्दै गहिरहेको छ । यस अटो शोमा एकै स्थानमा अरबौंको कारोबार हुने हुदा यसले अर्थतन्त्रलाई उथलपुथल पार्ने गर्दछ । विगतका वर्षहरुमा पनि हाम्रो अटो शो कार्यक्रमले अटो क्षेत्रलाई व्यवसायीक रुपमा ठुलो सहयोग मिलेको थियो । यसले केबल अटो व्यवसायीहरुलाई मात्र नभई अन्य अटो खरिदकर्ता तथा आर्थिक मामिलामा सरिक संघसस्थाहरुलाई समेत अबसर र सहयोग पु¥याने गर्दछ । यो मेलामा परिवेक्षक तथा अबलोककर्ताहरुको ठुलो उपस्थिति रहदै आएको छ । गत वर्ष मात्र करिब ५० हजार भन्दा माथिले अटो शो मेला अबलोकन गरेका थिए भने यो वर्ष सबै गरि करिब ६०–७० हजारले अटो शोको अबलोकन गर्ने हाम्रो बुझाईछ ।
नाडाले सबै खाले अटो व्यवसायीलाई समेट्न नसकेको भन्ने कुरा अतिरिक्त स्पेयर पार्टस्, टायर ट्युव तथा लुब्रिकेन्टका व्यवसायीहरुबाट सुन्ने गरिन्छ, वास्तविकता के हो ?
सानो र सिमित स्थानमा अटो शो गर्नु पर्दा हामीले विविध समस्याहरुको सामना गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अबस्था छ । हामीले चाहेर पनि सबै अटो व्यवसायीलाई यसमा समेट्न सकिराखेका छैनौं । अटो शोको स्टल बुकिङ्ग खुल्ला गरेको आधी घण्टा एक घण्टामा नै प्याक भै हाल्छ । यस भित्र हामीले विशेष गरेर सवारी साधनको शोलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछौं । किनकी यो अटो शोको मुख्य थिम्स् पनि नयाँ सवारी साधनहरुको प्रदर्शन गर्नु नै हो । त्यसो त हामीले अटोसँगै जोडिएका अन्य क्षेत्रहरुलाई पनि स्थान भने दिने गरेका छौं । केहिहद सम्म स्पेयर पार्टस्, एसिसरिज, टायर तथा लुब्रिकेन्टका क्षेत्रहरु भने कमै पर्ने गरेका छन् । भावि दिनहरुमा यस्ता क्षेत्रहरुलाई पनि छुट्टै स्थान दिई प्रदर्शनमा ल्याईने हाम्रो योजना रहेको छ । यी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले चित्त दुखाउनु पर्ने हो जस्तो त मलाई लाग्दैन ।
गत वर्षको तुलनामा अहिलेको अटो शोले कस्तो सफलता प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ त ? हरेक वर्ष आयोजना गरिने यस्ता अटो शोले केहि न केहि उपलब्धि हासिल गरेकै हुन्छन् । त्यसमा नाडाले पनि विशेष योजना बनाएको हुन्छ भने व्यवसायीहरु पनि तयार भएकै हुन्छन् । गत वर्षको विनासकारी महाभूकम्प र भारतको अघोषित नाका बन्दीको चपेटामा रहेको बेलामा त राम्रो व्यापार गर्न सफल यो मेलामा अहिले त नहुने कुरै छैन । जहाँ सम्म नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्र बैंकले लिगेको बैंकिङ्ग मौद्रिक नीति तथा अटो लोनमा लगाएको अंकुश थियो त्यो पनि अहिले सहज भैसकेको छ । राष्ट्र बैंकले लगाएको अटो लोनमा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको नियम अहिले घटाएर ३५ मा झारिसकेको छ । यसले पनि अटो किन्न चाहने ग्राहहरुलाई सहजा मिलेको छ । यसले गर्दा यो अटो शोमा स्वत गाडीको बुकिङ्क गर्ने र किन्नेको संख्या बढ्ने छ । गत वर्ष साढे ३ देखि ४ सय करोडको सवारी साधन बुकिङ्ग तथा व्यापार भएकोमा अहिलेको साल अझ त्यो भन्दा पनि माथि आर्थिक कारोबार हुने हाम्रो आंकलन रहेको छ । प्रस्ततिः प्रयास श्रेष्ठ
प्रकाशित ८ मङ्गसिर २0७४ , शुक्रबार | 2017-11-24 10:31:47